ေမေမေရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ေမေမေရ
Posted by ムラカミ on Jun 28, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Critic, Society & Lifestyle | 25 comments
ေမေမ သားေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုေခြစီ က ဆံပင္အတိုအရွည္နဲ႕ ဆက္စပ္မယ္ျမင္မိတယ္ေမေမ။
ေမေမပဲ စဥ္းစားၾကည့္ေလ။ ဆံပင္ရွည္တဲ့ ေမေမတို႕ အိပ္ထိယ ႏြယ္၀င္ေတြက ဖိႏွိပ္ခံရဆံုးျဖစ္ျပီး။
အဲ့သည့္အထက္မွာ သားတို႕ မဟာ ပုရိသ ေတြရွိတယ္ေမေမ။ ပုရိသခ်င္းတူတူေတာင္ ေမေမရယ္
အစိမ္းေရာင္၀တ္တဲ့ ေရွ႕တစ္လက္မေနာက္ေျပာင္ေတြက သားတို႕ထက္ ဆံပင္ပိုတိုတယ္ ဆုိျပီး
အခြင့္အေရးပိုယူၾကပါတယ္။ နာ့သင္းလာ့စ္ ေဖာ္အဲဗား ပါေမေမ .. ခုေတာ့ ဆံပင္လံုး၀မရွိတဲ့
အနီ ၀တ္သူေတြက သူရို႕အေပၚတက္ အခန့္သားထိုင္ၾကေတာ့မယ္တဲ့ ..။
သားေတာ့ေလ တေန႕တျခား ရွည္ရွည္ထြက္လာတဲ့ ေဟာဒိဆံပင္ေတြကို သိပ္မုန္းတယ္ ေမေမ။
ပရိက္ခရာ ၈ ပါးးးး တာဝန်ယူပါရစေ။
ရာသက်ပန် နိုင်ငံတာဝန် ထမ်းဆောင်ဖို့ မေမေ့ကို ကတိပေးပါ သားရယ်။
ရှည်ရှည်ထွက်လာတဲ့ဆံပင်တွေကို မုန်းကာမှမုန်း ..
ဦး ကျောက်ခဲ says:
ခုတော့ အာဝါဟဝိဝါဟပြုရင် ကိုယ့်ထက်ပိုတိုသူတွေကို
အော် … မေမေဆိုလို့ တို့ကိုများခေါ်တာလားလို့ … မေမေကတော့ ကတုံးမဟုတ်ပါဘူးကွယ် … ခုဒေါ့ ဆံပင်လေး ခပ်တိုတိုတော့ ညှပ်ထားတယ် …….
အကိုတော် ……. ဆီလီကွန် စွပ်ထားပါလားဟင် ….
ကတုံးတုံးလိုက်ရင်လဲ ဆံပင်က ပြန်ထွက်လာအုံးမှာ ….
“အင်းစိန်ရွာမ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဩဝါဒ”
လုပ်သင့်တာကို မလုပ်ရင် တာဝန်မကျေရာရောက်
အမျိုးဘာသာ သာသနာအရေး ရှောင်နေလို့မရ၊
မသိကျိုးကျွံပြုနေရင် ဘုရားလမ်းစဉ် မလိုက်ရာကျမယ်။
ဘာဆိုင်လဲ ပြောကြတာတော့ အင်မတန် စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်
လိုအပ်ရင် သားဖွားခန်းထဲ ဝင်ပြီး အင်္ဂုလိမာလသုတ် ဟောခွင့်ရှိ။
ဒါလည်း လူမှုရေး လုပ်တာပါပဲ။
ဆိုတော့ မီးဖွားရင် ဘုန်းကြီးပင့်ဂျဗျို့…ေွိ
၈ ပါးစပွန်ဆာဒွေ ရထားပီးသားကို.
မိဘတွေတာဝန်မကင်းဘူးလို့ယူဆပါတယ်။ ဘာလို့ကိုယ့်သားသမီးတွေကိုလူသားဆန်ဆန်မကြီးပြင်းစေပဲ မြင့်မြတ်တဲ့ ဘဝခြားကိုလွှတ်ချင်နေရတာလဲ။ ဂတုံးတုံးတာကောင်းပါတယ်။ ဒီမှာလဲ ကင်ဆာသမားတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ ့လိုက်ပြီးကတုံးတုံးနေကြတာ။ ဆာဒူးကြီးလုပ်မဲ့ဆြာဂီကတော့ ဆံပင်ရှည်ရှည်ထားပါ။
၅နှစ်အတွင်းတကြိမ်မှ သကြ်န် တွင်း ဒုလ္လဘ ရဟန်းမခံဖူးရင် နိုင်ငံသားအသိမှတ်ပြုကတ် ပယ်ဖျက်မယ် ဆိုတာမျိုး ဥပဒေ ထွက်လာရင် ကြိုဆိုကြမှာလားဟင်င်င်င်င်င်
ဆော်ဒီသွားပြီး လယ်ဘင်းဟာလာသွားလုပ်ဘါလါး !!!
ဂဒုံးမ ကြီးနဲ့ ညားလိမ့်မယ် ။
ဂဒုံး တုံးထားတဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ် ။ ဇဘင် မပေါက်တဲ့ သူကိုပြောတာ ။
သားရယ် အစိမ်းဝတ် ရှေ့တစ်လက်မနောက်ပြောင်တွေကို အနီဝတ် ဂဒုံးက အနိုင်ယူနိုင်မှာသေခြာလို့လား…
ခြကျွေးထားတဲ့ အကွက်တွေပါဟယ်…. ဒါပေမဲ့ သားပေါသလို နာ့သင်းလာ့စ် ဖော်အဲဗား…
သားလဲတော်သလိုနေ.. မေမေလဲ ယောက်ကျားယူတော့မယ်..
ဘယ်ကတုံးမှ ဘယ် ထိပ်ပြောင်ကိုမှ အလေးမပြုဘု.
ထိပ်ပြောင်ကသာ ကတုံးကို ထိုင်ထိုင်ရှိခိုးရတာ.
ထိပ်ပြောင် က ကတုံးကို သမရဲတာ လူကွယ်ယာမှာမှ.
ယနေ့ခေတ် ခု မဟုတ်တာလုပ် ခု အွန်လိုင်ာပေါ်ရောက် ခု တကမာ္ဘလုံးပြန့်
ခေတ်ဖြစ်နေတော့ အစိမ်းက အနီကို အရင်ကလို လူမမြင်အောင် ဆော်လို့မရတော့ဘု
လူမြင်ကွင်းဆိုရင်လည်း လက်အုပ်လေးတွေ ချီထားရမှာကိုးး
သည်တော့ ခုကိစ္စမှာ အစိမ်းက အနီကို အသုံးချတယ် ဘလားဘလားပြောနေကြတယ်.
ဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်. ယနေ့ SNS တန်ခိုးနဲ့. အစိမ်းကို အနီ က ပြန်လည် ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်းရှိနေပြီ
ဆံဘင်တွေကို မုန်းဒဒဲ့ …
ဒါဆိုလည်း အသွင် တူသွားအောင်
ကတုံး တုံးပလိုက်ဗျာ … ရှုပ်ဒယ် ..
သဂျီးဦးခိုင်ကတော့ ဘုန်းကြီး နိုင်ငံရေးလုပ်တာ အားပေးသတဲ့.. ဒဂယ်လည်းဖြစ်ရော နှစ်တထောင် ကျိန်စာလို့ သူဗဲ အသံဂေါင်းဟစ်တယ်… လုပ်စားလာတာ ကြာပီထင်ပ..
မားခိုမ် ကိုခနဖျောက်ထားဗျာ. မဲပြန်ပေးဘုန်းဘုန်းပြောတာ. မှန်မမှန်က စပြောကြည့်ကြရအောင်လား
ဝတ်မယ်ဆိုလည်း မှတ်ပုံတင်လေး ရအောင် ယူပါသားရယ်…
ဆံပင်က မုန်းစရာ မဟုတ်ပါဘူး သားရဲ့
ဆံပင်က ဈေးကောင်း ရသကွဲ့
ကိုယ့်ထက် သီလ သမာဓိ ပညာ သာပြီး ကိုယ့်ကို သံသရာလွတ်ကြောင်း တရား ချီးမြှင့်မယ့်
မည်သူ့ကိုမဆို ထိုင်ရှိခိုး နိုင်ပါရဲ့ဗျာ. သို့သော် ကိုယ့်အပေါ်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့် တခုလေးကိုတော့ဖြင့် စောဒက
တက်ပရစေ. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်တော်တို့က ပြဌာန်းပိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရသူတွေလား ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်
နောက်တနည်း လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ရော မကျန်တော့ဘူးလား.
ကျမ အထင်တော့ ဒီဥပဒေကအတည်ဖြစ်ဖို့မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတွင်းမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်တရားမမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်။နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေ။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတွေကိုခေတ်နဲ့အညီပြင်သင့်တာတွေပြင်ဆင်ပြီး အသက်သွင်းနိုင်ဖို့တော့မျော်လင့်မိတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်လွန်းတာ မကောင်းပါဘူး။ ဘာသာစုံ လူမျိုးစုံနေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာနိင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာသိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။ ပြသနာရဲ့ ရင်းမြစ်သိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုး အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အစွန်းနည်းနည်းရောက်သွားတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့လုပ်ဆောင်မှု ကြောင့် ဗုဒ်ဓ ဘာသာကနာမည်ပျက်မသွားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့ ပုံရိပ်သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါလဲ ကျမတို့တွေ သက်သေပြလို့ရပါတယ်။ ငါတို့တွေအစွန်းမရောက်ပါဘူး။ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာစုံနဲ့သင့်သင့်မြတ်မြတ်နေထိုင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ပါတယ်လို့။ ငါတို့တွေ ဝါဝါမြင်တိုင်းလည်းထိုင်မရှိခိုးပါဘူး။ မဲမဲမြင်တိုင်းလဲမဆဲပါဘူး။ ဂဏန်းတွေနဲ့လည်းရန်မဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အရာင်မပြောင်းသလို။ သူများယုံကြည်ချက်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်လို့။
အမျိုုးစောင့် ဥပဒေလာတော့မည် လော ၊ ဘာသာရေး က နိင်ငံရေးထဲကိုု ဝင်လာနေခြင်း
အမျိုးစောင့်ဥပဒေသည်ဦးဝီရသူရေးဆွဲခြင်းမဟုတ် by Popular Myanmar News Journal အမျိုးစောင့်ဥပဒေသည် အများထင်နေသကဲ့သို့ ဦးဝီရသူရေးဆွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတဝန်းရှိ ဆရာတော်ကြီးများ၏ ဩဝါဒစီစဉ်ဦးဆောင်မှုဖြင့်ဥပေဒေပညာရှင်များ ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားကြောင်း ယနေ့ အင်းစိန်အောင်ဆန်းတောရတပ်ဦးကျောင်း၌ပြုလုပ်သော အမျိုးဘာသာ၊သာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဩဝါဒခံယူပွဲနှင့် ဦးဆောင်ဆရာတော်များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပွဲတွင် တက်ရောက်လာသောဆရာတော်များက မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ယင်းဥပဒေအား လွှတ်တော်တင်သည့်အခါတွင်ထောက်ခံခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်းပြုသည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို မည်သည့်ပါတီ၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကပြုလုပ်သည်ကို သိလိုကြောင်းအမျိုးဘာသာ၊သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ ထောက်ခံဆွေးနွေးသောမော်လမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက မိန့်သည်။ “ဒီဥပဒေကို လွှတ်တော်တင်ရင် ဘယ်သူတွေကကန့်ကွက်မလဲဆိုတာ သိချင်တယ်၊ ကိုယ့်အမျိုးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေလို၊မလို ဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ။ ကန့်ကွက်ရင် အဲဒီကန့်ကွက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို ၂၀၁၅ မှာ မဲမပေးခိုင်းတော့ဘူး ၊မဲပေးမယ့်သူတွေ၊ဒကာ၊ဒကာမတွေဟာ ဘုန်းကြီးတွေလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့သိစေရမယ်” ဟု မော်လမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ထောက်ခံဆွေးနွေးမှုတွင် ထည့်သွင်းမိန့်ကြားသွားသည်။
အွန် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘုန်းကြီး အမတ်ရှိတယ်ပေ့ါ။ ထူးဆန်းထွေလာပြည်မြန်မာပဲ။
အဲသဟာကြောင့် ထင်ပါ့ ………..။ ဆံပင်ညှပ်ခတွေ ဈေးတက်နေတာ
Mg Yit Htoke on ကျနော်ရိုက်မိခဲ့သော….၁
Shar Thet Man on ကျနော်ရိုက်မိခဲ့သော….၁
Shar Thet Man on အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္လိုေသာ္ (၂) – ပါေမာကၡမ်ိုးေက်ာ္ျမင့္
Mg Yit Htoke on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ​၏အကြီးဆုံး အမှားများ
Shar Thet Man on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ​၏အကြီးဆုံး အမှားများ
နွေဦး on ဈေးမှန်
ဦး လေး မန်း on မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ၂၀၂၀ ‌ဖေဖော်ဝါရီ
Shar Thet Man (100950 Kyats )